Burmese taste - Iora: အိမ်ချက်ဒန်ပေါက်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ သခွားသီးအချဉ်သုပ်
Posted by Iora at 11:46 PM
ညယံ July 18, 2011 at 12:10 AM
ဒန်ပေါက်ချက်နည်းလွယ်တယ် ဆိုပေမယ့် မချက်တက်တာနဲ့သားရည်ပဲကျသွားတော့ဒယ်။ ဒန်ပေါက်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်း အရမ်းလိုက်တယ်။ အရင်တုန်းက နီလာဆိုင်မှာ စားရင် ချဉ်ပေါင်ဟင်းကို နှစ်ခါလောက်တောင်းရတယ်။
စတော်ဘယ်ရီသီးတွေ သကြားနဲ့ တို့ စားစရာ ကောင်းချက်တော့။
ခံစားချက်တွေလည်း အချိန်ရရင်ရေးပါအုန်း လို့ တောင်းဆိုပါတယ်နော် ...
Vista July 18, 2011 at 12:53 AM
စိတ်ညစ်တာတွေ ကင်းဝေးပါစေ ဒါမှ ဟင်းတွေ ငမ်းရမှာ
ဘေဘီ July 18, 2011 at 2:25 AM
ကိုယ်လည်း တူတူပဲ အိုင်အိုရာရေ
စိတ်ကူးတူနေတယ်သိလား အိမ်မှာ ဒန်ပေါက်ဖောက်တယ်
မနေ့ကမှပါ နောက်မှတင်မယ်။ ကမန်းကတန်းဒန်ပေါက်ကလည်း
အပြုံးပန်း July 18, 2011 at 5:12 AM
အိမ်ချက်ဒန်ပေါက်မှ ကိုယ်က စားချင်တာ၊
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 18, 2011 at 7:32 AM
ဒန်ပေါက်ကိုတစ်ခါမှ ကိုယ်တိုင် လုပ်မစားဖူးဘူး။ ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ် လုပ်တတ်ဘူးး) တစ်ခေါက်တော့ လုပ်စားကြည့်ပါဦးမယ်လေ ။ စတော်ဘယ်ရီတွေလှလိုက်တာနော် အရောင်ကို စိုရဲနေတာဘဲ စားချင်လိုက်တာ သခွားသုပ်လည်း သွားရေကျသွားတယ်
ကောင်းမွန်ဝင်း July 18, 2011 at 8:24 PM
လိုက်ဖက်ပါ့၊ အစပ်နဲ့ အဟပ်က။
အပြင်အဆင်ကလည်း ကောင်းတော့ စားချင်စဖွယ်ပဲ။
စိတ်မကောင်းစရာတွေလည်း ရှိကြတာပေါ့ နော် တခါတလေ။
ငှက်အကြောင်း ကတော့ အချိန်ရရင်ရေးပေါ့။
အိုင်အိုရာ့ အကြောင်းက ရေးချင်တာကိုရေးပါ။
ဒါပေမယ့် နှစ်ခုလုံးကိုတော့ အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်မှာရေးပါ။ အားပေးလျှက်။
ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည် ဒီမှာတော့အလိုက်တောင်းရင်ဆိုင်ကရိုက်လွှတ်လိမ့်မယ်။း)))
နောက်တော့မှ ဘာတွေရေးနေပါလိမ့် လို့ နောင်တရမယ်နော်။
ဟင်းကတော့ ချက်စားနေသရွေ့ တင်စရာရှိနေမှာမပူနဲ့ ။ ကုိုယ်ကဘိုစာသိပ်မကြိုက်တော့ ကုိုယ်တိုင်ချက်စားတာဘဲအဆင်ပြေတယ်လေ။ ဆိုင်ကလွယ်လွယ်ဝယ်ရတဲ့တရုပ်စာတွေကျတော့မကောင်းဘူး။ ကုန်အောင်မစားနုိုင်ဘူး။
ဒန်ပေါက်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အားပေးနားလည်မှုအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ကုိုယ်တို့ ဝမ်းသာစရာတွေကြားရရင်လည်း တူတူဆိုကောင်းမယ်နော်။
အားလုံးအဆင်သင့်ရှိနေတော့ ကမန်းကတန်းပေမဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘဲချက်ပြီးသွားပါတယ်။ ပစ္စည်းမစုံရင်တော့ တခါတခါချက်ရင်းစိတ်မပါတော့ဘူး။
ကုိုယ်ကထောပတ်တို့ ဂီးတို့ သီဟုိုစေ့တုို့ မထဲ့ချင်တော့ သိပ်လည်းစုံဘို့ မလိုဘူးလေ။
ဟုတ်တယ် အိမ်ချက်ဆိုတော့ ကုိုယ်ကြိုက်သလို ထဲ့လို့ ရတယ်လေ။ လုပ်ကြည့်ပါ။ သိပ်မခက်ပါဘူး။
လုပ်ကြည့်ပါ။ ချောက ဒီထက်ခက်တာတွေတောင်ချက်နေတာ။ အဆင်ပြေမှာပါ။ စတော်ဘယ်ရီတွေလည်းပေါနေပြီလေ။ လှလည်းလှ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်။ ကဲ..အားလုံးသာ အားပေးသွားပေတော့ ချောရေ..
သိပ်ပြီးနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတတ်တယ်နော်။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ အားပေးနားလည်ခင်မင်မှုအတွက် တကယ်ဝမ်းသာရပါတယ်။
စားချင်စဖွယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်။
rose of sharon July 18, 2011 at 9:41 PM
ဒန်ပေါက်က အဆင်သင့်ချက်လို့ရတဲ့ အထုတ်တွေဘဲ ဖောက်ချက်ဘူးတယ်... ကိုယ့်ဟာကိုယ် စီစဉ်ပြီး မချက်ဖူးဘူး... ပုံလေးကြည့်ပြီး စားချင်လိုက်တာ... ရန်ကုန်ပြန်မှ တဝစားတော့မယ်
ရို့ စ် အော့ဖ် ရှယ်ရွန်း..
ကုိုယ့်ဘာသာကုိုယ်ချက်စားတာ အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ ပုံလေးဘဲစားခိုင်းရတာ အားနာပါတယ်ကွယ်။ ကုိုယ်လည်း အရင်တုန်းကနယ်မှာ ပရောဂျက်သွားသွားလုပ်ပြီး ပြန်လာရင် ဒန်ပေါက်စားဘို့ က စာရင်းတခုလေ။း)
မြတ်ကြည် July 19, 2011 at 3:08 AM
Waa:waa: ဒံပေါက်စားချင်၍ ငိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ အရမ်းကောင်းမယ့်ပုံပဲ အစ်မ။ :')
ကုိုယ်လည်း အင်ဒီးယန်းဆုိုင်တွေမှာ ခဏခဏစားဖြစ်တော့ ကုိုယ်တုိုင်မချက်ဖြစ်တာတောင် နဲနဲကြာသွားပြီ။ မြန်မာကြိုက်ကတော့ ကုိုယ်တိုင်ချက်မှ မြန်မာပြည် ကဒန်ပေါက်နဲ့ ပိုတူတယ်။ စားလို့ လည်းပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ မှတ်ချက်လေးပေးသွားတော့ ပိုပြီးကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမိပါတယ်။
မြစ်ကျိုးအင်း July 23, 2011 at 10:06 PM
ထမင်းထစားရမှာ ပျင်းပြီး စာလိုက်ဖတ်နေတာ ဒန်ပေါက်ပွဲမြင်တော့ မနေနိင်တော့ဘူး ထစားရတော့မယ်။ အချဉ်လေးတွေ လုပ်ထားတာလည်း ဒန်ပေါက်နဲ့ တော်တော်လိုက်မယ့်ပုံပဲ။ နောက်နေ့တော့ ဝယ်စားရအုံးမယ်။
ထမင်းစားပြီးဖတ်ရင်အတော်ဘဲ။ ကျမလည်း သူများချက်ထားတာမှာကိုယ်ကြိုက်တာပါနေရင်..ဗိုက်ကဆာလာရော။
Your Briyani seems delicious!!! Just ate them in Ygn and actually I was disappointed. Take care!
I just got back from your blog.
Are you on the trip?
Where did you eat Briyani in Ygn?
T T Sweet July 29, 2011 at 9:44 PM
တစ်ခါမှ ကိ်ုယ့်ဟာကိုယ်မချက်ဖူးဘူး။ အထုတ်ဖောက်ပြီးပဲ ချက်စားဖူးတယ်။
I ate the biryani, which is bought from Kyat Shar Sun, at my hubby home. It was not delicious at all and yours and Baby's biryani seem really yummy!!!
san htun July 30, 2011 at 5:58 AM
ချက်ဘူးသွားရင်လည်း လွယ်သွားမှာပါ။ ကုိုယ်ထဲ့မဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ လွယ်လွယ်ရှိပြီး စိတ်ပါဘို့ ဘဲလိုတာပါ။ တိုဖူးကျိုသလောက်တော့ မပင်ပန်းဘူးထင်တာဘဲ။ (အုိုးသိပ်မကြီးရင်)
အခုအလုပ်မလုပ်သေးရင်. စိတ်ပါတဲ့နေ့ လက်တဲ့စမ်းကြည့်ပါလား။ ပျက်ရင်တော့မကျိန်ဆဲနဲ့ နော်..း)
အရင်ကဆို ကြက်လျှာစွန်းကကောင်းတယ်နော်။ ခေတ်ကပျက်တော့ လက်ရာတွေလည်းပျက်ကုန်ပြီထင်ပါ့။း)))
စား..စား..စာကျက်ဘို့ အားလိုတယ်မှုတ်လား။ စားနုိုင်မှ ကျက်နုိုင်မှား)
အုိုင်အိုရာ (နံမည်ထဲ့ဘို့ မေ့သွားလို့ )
Snow August 5, 2011 at 11:09 PM
ဘလော့ဂ်အပြင်အဆင်နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက အရမ်းလှတာပဲ။ အရမ်းကို အားကျပြီး ချက်ထားတာတွေကို မျက်စိနဲ့ တစ်ဝ လေ့လာပြီး ပြန်သွားပါတယ်။ အိုင်အိုရာဘလော့ဂ်လေးက တော်တော်ကို မျက်စိပသာဒဖြစ်စေတာပဲ။ Love it!
Iora August 6, 2011 at 11:10 AM
ဒီလိုအားပေးတာတွေဖတ်ရလေ..ဘလော့ထဲမှာ ပိုအချိန်ပေးချင်လေဖြစ်နေရတာပေါ့။း)
သက်ဝေ August 12, 2011 at 1:20 AM
စတော်ဘယ်ရီ စားချင်တယ်......................း)))
Iora August 12, 2011 at 6:28 PM
မသက်ဝေ ၀ုိုင် လုပ်ချင်စိတ်မပေါ်ခင်မြန်မြန်လေးစားလိုက်နော်။း)
ဆောင်း August 26, 2011 at 2:59 AM
ဒန်ပေါက်ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါလား။ အရောင်ကြည့်ပြီး သဘောကျ သွားလို့ 
jasmine(တောင်ကြီး) November 3, 2011 at 3:48 AM